Ukungavumelani phakathi kwabashadile mayelana nokusoka - Rabi Michael Avraham
Ingxabano phakathi kwabashadile mayelana nokusoka
Izimpendulo > Isigaba: Okujwayelekile > Ingxabano phakathi kwabashadile mayelana nokusoka
0 Nikeza izwi Susa umsindo
Iphayini Ubuzwe eminyakeni engu-2 edlule
Sawubona Rabi namaholide ajabulisayo,
Uma kukhishwa icala lokuthi kunengxabano phakathi kwabazali ababili mayelana nokusoka kwengane. Ngokomthetho kanye/noma ngokokuziphatha, kufanele yini iqembu elifuna ukusoka livunyelwe ukuthi likwenze? Noma kufanele isimo simiswe bese ingane ikhetha lapho isikhulile?
mikyab Abasebenzi Kuphendulwe eminyakeni engu-2 edlule
Kuya ngokuthi zaziyini izivumelwano phakathi kwabashadikazi kusukela ekuqaleni (ngesikhathi beshada). Uma ingekho imvume ecacile futhi ingenakutholwa ejele (isb. isiko elivamile endaweni yabo) njll., khona-ke kubonakala kimi ukuthi ngokokuziphatha umuntu kufanele avumele umntwana ukuba akhethe lapho ekhula.
IsiShayina futhi oyinyumba Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Ukuziphatha okuvela emthethweni wenkolo cha?
Futhi uma kunokungqubuzana phakathi kwenkolo nokuziphatha lapha, ingabe uyocabangela indawo futhi ukhethe ukuziphatha? (Eqinisweni, kungani ungasebenzisi lezi ngokujwayelekile emntwaneni? Isibonelo ezindaweni lapho umthetho noma umphakathi ungalivumi igama)
mikyab Abasebenzi	Uphendule eminyakeni engu-2 edlule
Abenkolo ngokuqinisekile akunjalo. Nokuthi ukuphikisa kukamama kuphuca isibopho sikababa?
Ngangingawuqondi umbuzo mayelana nensimu. Kuyini ukuxhumana?
Sicela ungene noma Register ukuhambisa impendulo yakho
Igama lomsebenzisi noma ikheli le-imeyili
→ Umbuzo odlule
Joyina abanye ababhalisile abangu-3,094
Mayelana nekholomu 36
Ukusungula inkolelo ekuhlakanipheni kubantu abangenangqondo
Ukuhlambalaza uNkulunkulu ngokuwela ngokubomvu
Malume Vuliwe Ukuvuka Nokuwa kukaBennett Nezincazelo Zazo (Ikholomu 486)
Ori Vuliwe Ukuvuka Nokuwa kukaBennett Nezincazelo Zazo (Ikholomu 486)
Haim Vuliwe Ukuvuka Nokuwa kukaBennett Nezincazelo Zazo (Ikholomu 486)
Michi Vuliwe Ukuvuka Nokuwa kukaBennett Nezincazelo Zazo (Ikholomu 486)